China ighikota malite ịgba, igwe anaghị agba nchara malite ịgba bit, ígwè dakpuo bit, ígwè malite ịgba bit, HSS malite ịgba bit, osisi oghere hụrụ ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
Ighikota dakpuo, igwe anaghị agba nchara malite ịgba bit, ígwè malite ịgba bit, ígwè malite ịgba bit, HSS malite ịgba bit, osisi oghere hụrụ
Ngwaahịa: Ngwakọta Ngbaji Ngbaji Ngbaji
Ihe a na-ejikarị emegharị na ahịa bụ nke nchara nchara (ọcha) na simenti carbide (nwa ojii).
Igwe dị elu nwere obere ike, mana ezigbo ike na ọnụ ala, mana enweghị ike iji ya na-agba ọsọ ọsọ. A na-ejikarị ya eme ihe maka ihe ndị nwere isi ike dị ala, dịka alloy aluminum, obere carbon steel, wdg;
Senti carbide nwere nnukwu ekweghị ekwe, obere ike na elu price. Ọ ga-eji na elu-ọsọ ọnwụ. A na-ejikarị ya maka ihe ndị nwere oke ike, dị ka ígwè alloy na carbon dị elu mgbe a gbasịrị ya.
BOSENDA Full egweri ighikota malite ịgba Bits / Metal malite ịgba Bits na ulo oru ọkọlọtọ, tinye maka igwe anaghị agba nchara, igba ígwè, igba ígwè, I-doo, aluminum alloy na ndị ọzọ metal ihe. Egosipụta na elu mma nnukwu ọsọ ngwá ọrụ ígwè, agụụ okpomọkụ ọgwụgwọ, nkọ na inogide.
Ma HSS na sikwuo carbide ihe, nwere ike ji mee maka igwe anaghị agba nchara, ígwè mpempe akwụkwọ, n'akuku ígwè, ọla kọpa na aluminom na ndị ọzọ ọla. Ya kpamkpam Mike, na-egbusi agụba, na-eyi elu-eguzogide ma na ọ nwere a ogologo ọrụ ndụ. Nnennen shank adabara electric aka malite ịgba na bench osote.
Ighikota malite ịgba ibe n'ibe nke dị iche iche HSS ihe na si ike alloy ihe nwere ike ji mee ihe dị iche iche metal ihe na ha dị iche iche ọrụ life.The Cemented carbide ihe malite ịgba bits nwere elu ekweghị ekwe, elu ike, elu eyi eguzogide na corrosion eguzogide, magburu onwe arụmọrụ, anụ na a pụrụ ịdabere na àgwà.
Anyị na-ahọrọ ihe kacha adabara ighikota drill bits maka gị dị ka ihe mkpọpu ala gị, anyị na-enye ngwaahịa ọkachamara kachasị. N'ime afọ 10 gara aga, anyị ebubata blọgụ anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile nke gụnyere ọtụtụ mba gafee ụwa, mma anyị bụ mgbe a na isi nke anyị azụmahịa na-eme na anyị ga-mgbe mesiri mesiri ike na àgwà akara na mgbe ire ọrụ iji nọgide na-asọmpi na ubi.
BOSENDA Twist Drill Bits na-enye nkọwa zuru ezu, na-emeju mkpọpu nke ụdị ihe ọla ọ bụla.
Nke gara aga: Ntuzi Flute Machine Mgbakwunye, Mgba ọkụ uzo mgbapụta, Mgba ọkụ uzo, M35 Cobalt
Osote: Woodcutting rawụta ibe n'ibe, stright shank, woodworking cutter, rawụta ibe n'ibe
Electric hama, electric draft chisel, SDS, Ma ...